Akwukwo - Ihe mkpuchi ndi kachasi ocha maka nchekwa Sun
Ihe mkpuchi ejiji na-acha odo odo na-abụ ihe ejiji kachasị mma maka nchekwa anwụ na ụlọ ọrụ ugbu a. Dị ka ọ na-erite uru nke ịrụ ọrụ dị mfe, ịdị gara gara, ogologo ndụ ogologo yana ọfụma maka ebe dị iche iche.
N'ihi mkpa ịchekwa ike na nzuzo, Blackout Roller blinds dị mkpa karịa na ndozi windo. Ọ nwere ike igbochi UV, belata obere ọkụ ma ọ bụ gosipụta anwụ, yabụ nwere ike ibute ọrụ dị mma nke ịchekwa ike, nke a na-enye aka na njikwa ike.
Blackout kpuru ìsì na-eji na Cafe, office, n'ụlọ, ewepụghị, ụlọ, na mpaghara azụmahịa. Ọ dị nnọọ mfe iji wụnye ma dochie ya.
ETEX chepụtara oke aghụghọ nke uwe ojii na -emechi ihe nzuzu nke dị elu ma na-ele anya dị elu iji dabara maka ahịa achọrọ.
Obosara: obosara nke 200-320cm, nnukwu nhọrọ obosara na-ezute ihe dị iche iche maka ahịa dị iche iche. A na-eji 100% polyester mee ihe ndị a, anyị na-eji akwa yarn dị elu na kemịcha anụcha ka ọ bụrụ ịrụ ọrụ, nke a na-agba mbọ ogologo ndụ na nchekwa maka ahụike.
Iji hụ na ụdị akwa anyị dị mma, ETEX na -eme ka akwa ndị anyị na-ejighị emezi gaa nyocha nke SGS na metal dị egwu, AZO Free, PVC Free.
Ọsọ Light: 5 klu Blue Wool
Anyị nwekwara ike mepụta akwa ojii anyị na-etinye n'ime mmiri anaghị anyụ anyụ, Proof Fire, anti-bacteria, anti-fugus, anti-dust, anti-mkpọtụ, ịcha mkpụrụ osisi, ụdị ọla ọcha dịka ọ dị mkpa maka ndị ahịa.
Anyị FR Standard dị na BS 5869-1980, NFPA701
Anyị agbanyụcha ọkụ nwekwara ike Mee Mee N'onwe Gị na ịmepụta agba ọhụụ dịka mkpa onye ahịa, a ga-ahụta agba gị na mmepụta anyị.
ETEX Blackout Roller Blind Fabrics nwere oke nkatọ na cupping na flatness, nke a bụ uru anyị na etiti, Anyị na-eji kemịkalụ na-ebubata ya, ọ na-enye arụmọrụ kachasị mma na nghọta na akwa ojii.
Costgwọ anyị na-asọmpi n'ihi na anyị na-eme ike niile iji chịkwaa ego na usoro ọ bụla ma na-enye ndị ahịa ụgwọ ọnụ ahịa dị mma maka akwa kachasị arụ ọrụ.
Ọnụego UV igbochi: 100%, ọnụego Blackout: 100%
Ntughari ọkụ: 45%, nnyefe okpomọkụ: 10%
Ibu ibu: 320-440gsm
Ihe mkpuchi: Acid Acid